Vanimpotoana mystagogique - Fihirana Katolika Malagasy
Daty : 16/04/2009
Manantitra ny fiarahabana
nahatratra ny Paka!
Fanomezana omen'i Kristy ny Mpanara-dia azy ny Fiadanana, Fanomezana navelany ho lova, satria Azy... Dimampolo andro handinihana manokana ny misterin'ny Finoana sy ny sakramenta ny vanim-potoanan'ny Paka. Izany no hiantsoana azy efa hatrany amin'ny fiandohan'ny Fiangonana hoe : Vanimpotoana Mystagogique...
Ireo Neofita (terabao) nandray ny Sakramenta firosoana ho Kristianina (Batemy - Fankaherezana - Eokaristia) diamandinika ny fahasoavanasy ny raki-miafinafonosin'ireo Misterin'ny Finoana nankalazaina...Dia ahoana ho hahalalana fa mino ny olona iray? Inona ny Finoana...
Raha mino amin’ny fonao tokoa ianao dia hovonjena, hoy ny mpitoriteny... dia hoy aho hoe mba tena mino ve izy ireo, sa mitory mba hahazo laza na hahazo tombontsoa? Inona no hahafantarana fa mino ny olona iray? Inona ny Finoana ambaran'i Joany amintsika? Vakiteny faharoa (1Jo 5, 1-6) Fahaterahana amin'ny maha-Zanak'Andriamanitra izay noraisintsika tamin'ny Batemy ka hivelomantsika araka ny Didy natolony ho antsika: ny didim-pitiavana.
Ambaran'ireo Evanjely mitantara ny fitsanganan-ko velona fa izay nifankahita tamin'i Kristy Tafatsangana dia ho maimay hitantara izany amin'ny havana aman-tsakaiza.
Dia iza no mino? Ahoana no hahatsapantsika fa tena mpino isika? Sa dia atao valy boraingina fotsiny hoe rehefa mino ianao dia tsara, tsy mino ianao, raharahanao izany... (Jereo ny fanontaniana farany amin’ity fifampizarana ity) Hanazava izany ny famintinana ireo vakiteny aroso amin'ny alahady 7 fankalazana ny Paka ao amin'ny tohiny...
Anisan’ny fanehoana izany finoana izany ny Sakramenta (Ny famaritana ny sakramenta dia Famantarana hita maso na tsapain’ny tanana na renesin’ny sofina, manambara sy mampahazo ny Fahasoavana), izay hifampizarako aminao etoana. Aorian’ny Paka manko no fotoana nandalinan’ny kristianina ny tena maha-kristianina azy, indrindra raha zohiana ny lovam-panahy nifandovana tamin’ny taonjato maro nifandimby, hatrany am-pihandohana. Nandritra ny karemy manko, ireo nantsoina hoe katekomena (avy amin’ny grika hoe κατηχο�?μενος izay midika : mampianatra amin’ny feo avo, tsy azo afangaro amin’ny katesizy izay midika akon’ny fampianarana amin’ny fiainana) dia niomana ho amin’ny fandraisana ny batemy.
Ireo alahady 7 amin’ny Paka, araka izany dia nandinihana ny sakramenta fito (Tsy hiady hevitra momba ny isan’ny sakramenta aho, satria manko ho an’ny Mpino an’i Kristy sasany, tsy misy afa-tsy sakramenta roa na telo... ho an’ny fiangonana katolika dia notanana ho fito ny isan’ny sakramenta), loharanom-pahasoavana ho an’ny mpino.
Ny alahady voalohany dia niainana sy nanavaozana ny tokin’ny batemy (ankoatry ny fankalazana ny sakramentan’ny Batemy, ny litorjian’ny Jiro sy ny Rano dia manavao ny toky nomena tamin’ny batemy ny Kristianina).
Ny alahady faha-fito kosa, ialohavan’ny Fiakarana any an-danitra ‘Ascension’ amin’ny faritra sasany, alahadin’ny fiakarana ho an’ny sasany, dia mamintina ny vavaka nataon’i Kristy ho an’ny fiangonana : mba ho iray ihany izy rehetra. (Jn 17, 1-11a [taona A]; 11b-19 [taona B]; 20-26 [taona D], mampahatsiaro ilay sakramenta manambara ny misterin’i Kristy sy ny Fiangonana, ny misterin’ny Fitiavana (Vakio ny Taratasin’i Paoly ho an’ny Efesiana (Ef 5, 21-33) milaza momba ny Fifankatiavan’ny lahy sy ny vavy).
Dia samia mandinika ny fiainany hoe tamin’ny inona no niarahako maty tamin’i Kristy... ho ahy manokana manko, mbola manana matoatoa (ireo fahotana sy ireo zavatra nolaviko mba hanarahako ny Tompo, nefa avy eo toa mahafinaritra ahy indray ny miverina aminy avy eo... toa tsy foiko hofongorana tanteraka) mandehandeha ao am-poko aho ka mazava loatra ireo no manakana ahy tsy hihaina tanteraka ny misterin’ny Paka.
< Alahady Fahaefatra fankalazana ny Paka